Telo Knutby mpitandrina fitsarana | Apg29
Telo Knutby mpitandrina fitsarana
Mpanao fanompoam-pivavahana teo aloha telo ny Fiangonana Filadelfia Knutby dia hotsaraina amin'ny Alarobia.
Ny iray amin'ireo voampanga ho Asa Waldau, lasa fantatra amin'ny hoe ilay vadin'i Kristy araka ny famonoana ny mpitandrina ny vadiny sy ny fanandramana ny hamono ny namana any Knutby tamin'ny 2004.
Ny biraon'ny mpampanoa lalàna nilaza fa ny fiampangana momba tranga maro ny ratsy fitsaboana sy ny fanararaotana ara-nofo ny olona miankina.
Ao amin'ny gazety Ny andro dia manana mpitsabo aretin-tsaina Rigmor Robert nilaza momba ny pastoraly lahateny izay efa natao tao amin'ny fiangonana, isan-karazany endrika fanararaotana nataony toy ny mikapoka, olona efa nodiaviny, tufts ny volo efa tonta izy, izany dia efa hanaikitra, ary ny fanararaotana ara-nofo no nitranga.
Ao amin'ny gazety Expressen hoy ny mpampanoa lalàna Liselotte Herschend ny vadin'i Kristy (Asa Waldau) dia tsy ahiana ny firaisana ara-nofo heloka bevava. Izy dia ahiana ny fanararaotana.
Ary tamin'ny telo voampanga mpitondra iray ihany no ho henjehina noho ny fahadisoana ara-nofo.
Mamono eny an Knutby
Tamin'ny 2004 ny famonoana olona sy ny fikasana hamono olona natao tao amin'ny fiangonana kristianina tany Philadelphia Knutby.
Izany no nahazo ny saina malalaka ao amin'ny haino aman-jery soedoà izay fa efa voasoratra ary nanao tatitra maro momba ny foto-kevitra. Izy ireo ihany koa ny voasarika ny saina ho amin'ny vadin'i Kristy-fotopampianarana.
"Inona no tsy fantatra dia ny hoe fiangonana Knutby mandà fa i Jesosy no Andriamanitra. Izany no tena lehibe."
Vadin'i Kristy Sekoly
Kristy dia matetika fotopampianarana zana-borona fantatra any Knutby. Fa izao fivadiham-pinoana tena miavaka ny Knutby na inona na inona.
Efa ela ity fotopampianarana nisy tao amin'ny Eglizy Katolika . Inona no miavaka amin'ny Knutby angamba dia ny hoe toa izy ireo manana ny akany tao.
Mandà fa i Jesosy no Andriamanitra
Inona no tsy fantatra dia ny hoe fiangonana Knutby mandà fa i Jesosy no Andriamanitra . Izany no tena lehibe.
Mandà ve ianao fa i Jesosy no Andriamanitra - dia mandà ianao fa ny Tompo ary avy eo dia tsy afaka ho voavonjy!
"Tamin'ny 20 May 2018 dia Philadelphia Fiangonana Knutby teo. Ary nisy afa-tsy mpikambana roa."
Ny fiangonana dia nakatona tamin'ny 2018
1921 no nanorina Knutby Philadelphia ho toy ny fivoriana Pentekosta.
Tamin'ny fotoana ny famonoana olona sy ny fikasana hamono olona tamin'ny 2004, ny Philadelphia Fiangonana ny mpikambana 90. Nisy avo roa heny izay rehetra toy ny teo aloha Asa Waldau tonga tany.
Tamin'ny 20 May 2018 dia Philadelphia Fiangonana Knutby teo. Ary nisy afa-tsy mpikambana roa.